Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2012 |
Dia teto Nairobi (fahatongavana)
2012-06-29 @ 06:20 in Ankapobeny
Miarahaba ny rehetra indray amin'ny alalan'ity lahatsoratra ity. Elaela tsy nanoratra nefa tahaka ny hahavita izany indray satria ratsy dia ratsy ny fifandraisana aty amin'ny toerana ivantanako. Mba misy tombony ihany ny tahaka izay satria tsy variana mamaky teny intsony fa mba mikaroka izay hosoratana amin'izay.
Fantatsika moa fa misy zotra-pifandraisana Afrikana ihany mampifandray an'i Madagasikara amin'i Afrika. Iray amin'izany ny Airlink izay Afrikana Tatsimo araka ny fahalalako, iray hafa ihany koa ny Kenyan Airways fantatra amin'ny anarany ary manana ny tigetra ho "The Pride of Afrika" na ny reharehan'i Afrika. Raha niala tany an-tanindrazana ny tena, tsy dia feno loatra ny voromby. Angamba mitady ny seza aloha ny ankamaroan'ny mpandeha fa ny nifanitsy taminay tsy nisy olona. Roa ihany izahay no iray laharana. Voamarika kosa fa saika ny androatokon'ny mpandeha no Karana avokoa, ary tsy vitsy amin'izy ireo no mitondra ny pasipaoro malagasy. Zara fa nisy kosa, fa nisy ihany, ny Malagasy.
Teny an-dalana moa tsy dia nisy loatra ny olana, Teny Swahili sy teny Anglisy no hita amin'ny seza ary tahaka izany ihany koa no heny resahin'ireo mpikarakara amin'ny mpandeha. Rehefa tonga teo amin'ny seranampiaramanidin'i Jomo Kenyatta izahay. Variana ihany fa manana irony lalantsara mampifandray ny voromby amin'ny seranana irony ry zareo. Isika kosa moa efa ambakainy raha amin'izay lafiny izay. Somary mba nisy fifanindriam-potoana kely teo amin'ny voromby roa teo Ivato, ny iray zotra anatiny ary ny anay zotra ivelany fa tsy afa-nandeha aloha izahay fa ry zareo zotra anatiny no mandeha eny amin'ny tarmac, araka ny fitenenana vahiny, io zotra anatiny io moa dia hita fa ny teratany vahiny eoropeana no tena maro an'isa. Rehefa tapitra avokoa ry zareo ireo vao afa-nanitsaka ny tarmac izahay hizotra eny amin'ny voromby hiondrananay. Mba efa nitsidika firenena ila-bolantany atsimo hafa izahay fa toy izany ihany koa ny tany.
Saiky nahafanina ihany ny nivezivezy tao anatin'ilay seranam-piaramanidina vahiny, sady sambany rahateo no nankaty. Gaga nahita ny lalana ho an'ireo hiampita hiondrana any an-toerankafa nefa saika tsy nahita izay lalana ho an'ireo hitody. Soa fa nisy Malagasy iray tonga dia niteny hoe tsy any mihitsy ny lalana fa atsy ka! Somary nifampiresaka moa izahay avy teo. Efa mpivezivezy firenena maromaro ihany ranamana, indrindra fa ny firenena Afrikana, araka ny filazany. Rehefa hivoaka isika, hoy izy, dia etsy amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Comesa no andehanantsika fa tsy tokony handoa visa (US$50) isika. Tsy nahita izay fanamarihana izay aho, ary gaga ihany satria raha ny tokony ho izy tokoa dia ao anatin'izany fikambanana izany isika. Saingy rehefa tonga teo amin'ny fandoavana visa dia nandoa vola ihany ny Malagasy (tsy mandoa kosa ny Maorisiana ohatra!). Gaga ilay ranamana nilaza taminay teo satria vao tamin'ny volana desambra izy no nandeha taty, ary tsy nandoa visa, hono.
Tsy dia nisy olana loatra ny resaka fisavana teo amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy nisy fisavana, fa ny mahaliana ahy kosa moa dia ny fisavana rehefa hody any an-tanindrazana na hifindra firenenkafa indray. Nisy taratasy izay manko nofenoina tany anaty voromby anoratanao izay zavatra manana sanda betsabetsaka na lafolafo miaraka aminao. Mety ho ampitahainy amin'izay ny io taratasy nofenoinao io sy ny zavatra entinao ary ho fantany avy hatrany ny zavatra novidianao teto Kenya. Tany aloha ny eirtreritro satria tsy nariany iny taratasy iny. Lesona azo raisina ilay izy raha izay araka ny eriteritro izay tokoa. Saingy ho hita eo ihany moa, satria toa mifandrindra amin'izay ifanarahan'ny ao amin'ny mpikambana COMESA ilay izy, na misy politika ambadika amin'ny fanaovan'ny Kenyana io famenoana taratasy io. Eto aho somary miverina kely satria nisy adino. Tao anatin'ny fiaramanidina, vao teo am-piaingana kelikely dia nomen'ny hôtesy taratasy fenoina avy hatrany izay rehetra mifarana eto Nairobi ny diany. Nieritreritra moa aho tamin'izay hoe mba be fombafomba koa ry zareo izany... Saingy samy manana ny fanaony moa ny rehetra.
Rehefa teny an-dalana hody vao tantara, tena mihitsoka ny lalana "fodiana", ny olana amin'izy io? Miara-mirava avokoa ny mpiasa dia miara-mamonjy ny fonenany, hipoka ho azy ny lalana ary mifanety ny fiara. Ny tena miteraka ny fitohanana, hoy ilay saofera nitondra anay, isaky ny rond-point no ajanon'ny polisy ny fiara handehanan'izay mifanapaka amin'ilay lalambe (tsy mbola misy mitovy amin'izany lalana izany any amintsika hatreto. Rehefa maraina hiasa sy ny hariva hody izany ny lalana no mihitsoka amin'ny ankapobeny raha ny filazan'ny saofera nitondra anay fa dia ho hita eo moa ny amin'izay. Adiny roa ny lalana nandehananay ry zareo a! nefa mitovitovy amin'i Ivato Analakely ihany raha heverina. Izay aloha fa rehefa avy eo indray manao misimisy.
Jentilisa, Nairobi 29 jona 2012.
Nosakanana tsy hanoratra dia amoronana lainga i Jentilisa
2012-06-02 @ 23:41 in Ankapobeny
Mety ho gaga angamba ianareo raha alimbe tahaka izao indray vao manoratra etoana. Tsy maintsy manoratra satria misy ireo mitady hanala baraka. Mba nanam-potoana manko aho dia niady hevitra tao amin'ny http://www.tim-madagascar.org/forum/list.php?1 kanjo afaka fotoana fohifohy dia tsy afa-nanoratra tao intsony. Dia novakiako ihany izay soratra tao fa raikitra amin'izay ny fanoratana izay lazaina fa nosoratako hono. Dia tery aho hanoratra etoana satria manjakazaka ery izao Tsimahafotsy na/sy Ebania izao manala baraka rehefa tsy afa-manoratra ao intsony ny tena.
Mampiahiahy tanteraka noho izany ny ataon'ny ao raha ny mpanompa olona mbola afa-manoratra tsara ao amin'io sehatra io fa ny hafa kosa tsy afa-nanoratra intsony. Efa nanoratra tamin'ny mpitantana ihany moa ny tena fa tsy misy valiny sady raha ny fanaony tsy hahazo valiny izany e! Tsy tompon'andraikitra amin'izay lazaina fa nosoratan'i Jentilisa ao amin'io forum io aho manomboka izao fotoana anoratako izao.
Tsy maintsy mirary soa ny reny rehetra ihany koa amin'ity vaninandro ity satria fetin'ny reny eto Madagasikara amin'ity alahady ity. Hahafaly anareo anie ny nateraky ny kibonareo ary hifanantitra amin'ny vady aman-janaka ianareo. Manoroka anareo amin'ny mahazanaka ihany koa eee!
Jentilisa 3 jona 2012 amin'ny 1:40 eto Madagasikara